Tady fiambenana Apple LGBT vaovao | Avy amin'ny mac aho
Apple Watch Bands vaovao
Ny orinasa Cupertino dia namoaka fehin-kibo vaovao ho an'ny Apple Watch izay anaovan'izy ireo ny lokon'ny sainam-pirenena LGBT. Ny fanoloran-tenan'i Apple amin'ity vondrona ity dia tena zava-dehibe ary amin'ity tranga ity, ankoatry ny Ny fehin-kibo miaraka amin'ireo loko Solo Loop sy Nike Sport Loop, dia nandefa andiana tady Hermès vaovao ihany koa.
Avo lenta ny vidin'entana karazana fehin'ny Apple tany am-boalohany fa ho an'ny Hermès dia lafo tokoa ary miresaka tadidy 339 euro izahay. Amin'ity tranga ity, dia momba ny tady manokana izay vitsy ny mpampiasa no afaka mividy.
Famolavolana LGBT ho an'ny Solo Loop sy Nike Sport Loop
Ireo mpampiasa mieritreritra ny hividy tadin-damban'ny Apple dia afaka manao izany amin'ny fisafidianana ireo maodely fahatsiarovana LGBT roa. Solo iray mirandrana ary nisy nylon edisiona Nike tonga zava-baovao taorian'ny fanombohan'ny Apple Music niaraka tamin'ny audio spatial sy Dolby Atmos.
Ny fehikibo izay efa azo amidy halefa eo anelanelan'ny 25 sy 28 Mey ho an'ireo mpampiasa azy ara-dalàna. Ireo daty fanaterana ireo dia mety miovaova arakaraka ny tinady amin'ny fehikibo, fa amin'izao fotoana izao ary raha manoratra an'ity lahatsoratra ity izahay dia ireo no daty voalaza. Azo atao angamba ny handefasan'ny Apple tadiny kokoa na ny endrika vaovao rehefa avy eo, hanitarana ny katalaoginy modely misy bebe kokoa.
Raha ny maodely Hermès, misy loko maro kokoa, azonao atao ny mahita ny karazany rehetra ao amin'ny magazain'i Apple. eto ihany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Apple Watch Bands vaovao
Kitapo finday vaovao azo jerena: Beats Studio Buds
Apple Music Hi-Fi mifanaraka amin'i Dolby Atmos tonga tsy misy vidiny fanampiny